Faahfaahin ku saabsan Fannaanka Nimcaan Hillaac oo lagu xidhay Sudan+Maxkamad la geeyay+Xukun lagu riday | Berberanews.com
Home WARARKA Faahfaahin ku saabsan Fannaanka Nimcaan Hillaac oo lagu xidhay Sudan+Maxkamad la geeyay+Xukun...
Faahfaahin ku saabsan Fannaanka Nimcaan Hillaac oo lagu xidhay Sudan+Maxkamad la geeyay+Xukun lagu riday
Khartum(Berberanews):- Fannaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan (Nimcaan-Hillaac), ayaa xalay lagu xidhay magaalada Khartuum ee Caasimadda waddanka Suudaan. Fannaanka ayaa Boolisku qabteen oo xidheen isaga oo ku dhex-jira Bandhig-faneed (Live Shaw) uu mid ka mid ah Huteellada magaaladaas ku qabtay oo Dad badani ka qaybgaleen.
Nimcaan-Hillaac, ayaa la xidhay isaga oo ku sugan Hool uu ka socday Bandhig-faneedka oo ay Soomaalida magaaladaasi ku daawanayeen Heesihiisa oo ay Musigga u tumayeen Dhallinyaro reer Sudan ah. Kaas oo illaa xalay xidhnaa, isla markaana Maxkamad la hor-geeyey Khamiistii Maanta, taasoo xukun ku ridday.
Xukunka ayaa ahaa Ganaax Lacageed oo u dhiganta illaa Kun iyo Shan Boqol oo Doollarka Maraykanka ah; Sida uu Weriye Caasha-Cuud oo ka tirsan Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA u xaqiijiyey Fiidow Maxamuud Fiidow oo ka tirsan Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartuum.
Waxaanu Fiidow sheegay in xadhigga Fannaanku uu yimi markii ay Dhalinyarada qaban-qaabada Xafladda Bandhig-faneedka ah wadday ay qaab qaldan u kiraysteen Hoolkaas oo ay Aroos ugu sheegeen, markii la arkay inuu Bandhig-faneed lacag lagu galayo yahayna ay Booliska dalbadeen oo sidaa lagu xidhay isaga iyo Xubno kale.
Waraysiga ay Caasha-Cuud la yeelatay Masuulka ka tirsan Safaaradda dawladda Federaalka Soomaaliya ee magaalada Khartuum Fiidow Maxamuud Fiidaw, oo uu ku faahfaahiyey sababaha xadhigga keenay iyo sida xaaladdu ku dambaysay, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa dhegaysigan hoose ee ka bogasho wacan :-
Previous articleSidee Loo Baabi’in karaa Bidaarta loona Joojin karaaTimaha Daata Xogta Dahsoon
Next articleMudaharaad Lagaga Soo Horjeedo Saldhiga Milatari Ee Berbera Oo Ka Dhacay Sweden